१० हो कि १२ : मान्छे गन्न नजान्ने पत्रकार कि अदालतका कर्मचारी? – MySansar
कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले मल खरिद गर्दा एक अर्बको भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। यो सम्बन्धी विभिन्न अनलाइन मिडियामा समाचार हेर्दा ट्वाँ पर्न बाध्य भइयो।
अचम्म लाग्छ, न यो कुनै ब्रेकिङ न्युज थियो, न केही समय ढिला हुँदैमा उत्पात् बितिजाने केही कुरा थियो। धेरैले त अख्तियारले पठाएको विज्ञप्तिलाई नै आधार बनाएका थिए समाचारको। तर त्यही विज्ञप्ति पनि राम्रोसँग पढिदिएको भए त गल्ती हुन्न थियो होला नि।
भयो के भने अख्तियारले यो विषयमा कति जनालाई मुद्दा चलाएको भन्ने विषयमा अनलाइन मिडियाहरुमा आएका समाचार मिलेन। धेरैले लेखे, १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरियो।
उदाहरणका लागि यी मिडियाका समाचार हेरौँ-
नागरिक (हेडलाइनमा नभए पनि लिडलाइनमा) : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामाग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो।
रातोपाटी : डिएपी मलमा एक अर्ब ५३ लाख बराबरको भ्रष्टाचार, १२ जनामाथि मुद्दा
बिजमान्डु : मलमा एक अर्ब अनियमितता देखेपछि कृषि सामग्रीका प्रमुखसहित १२ जनाविरुद्ध अख्‍तियारको मुद्दा
नेपालसमय : मल खरिदमा नेत्रबहादुर भण्डारीसहित १२ जनाले एक अर्ब भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर
डीसी नेपाल : कृषि सामग्री लिमिटेडमा डेढ अर्ब भ्रष्टाचार, प्रबन्ध सञ्चालकसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा
फरकधार : कृषि कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
इमेजखबर : कृषि सामग्रीका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर, मल खरिदमा एक अर्ब भ्रष्टाचार
अनलाइनखबर, शिलापत्र, उकेरा, बाह्रखरी जस्ता अनलाइनहरुले भने १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको मात्र लेखे।
सबैभन्दा फरक चाहिँ हाम्रा ऋषि धमलाको अनलाइन रिपोर्टसनेपालले लेख्यो- ८ जना। यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्- १ अर्बको मलकाण्डमा कृषि सामाग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
लौ भो त अब ? कति जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरियो त ? १२ कि १० कि ८ ? मिडियामा फरक फरक समाचार किन ? जबकि यो कुनै स्रोतद्वारा प्राप्त समाचार नभएर अख्तियारले बाकाइदा विज्ञप्ति निकालेको समाचार हो।
म मात्र स्कूलमा हिसाबमा फेल भएको भनेको त अरु पनि उस्तै रैछन् कि के हो 🙂
ल गनौँ न त अख्तियारकै विज्ञप्ति अगाडि राखेर उसो भए-
मैले गन्दा त १० जना मात्र देखियो। त्यसो भए यी मिडियाले कहाँबाट चाहिँ १२ वा ८ लेखे त? यसो खोज्दै जाँदा नेपाल न्युज एजेन्सीको यो भिडियो भेटियो-
यसमा विशेष अदालतका कर्मचारीले १२ जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको भनेका रहेछन्। शायद् यही न्युज एजेन्सीकै न्युजमा भर परेर पो हो कि यी मिडियाको समाचार बिग्रेको।
अख्तियारको वेबसाइटमा राखिएको विज्ञप्तिमा भने १० जना र २ वटा कम्पनी लेखिएको रहेछ।
१० र २ जोडेर १२ त हुन्छ। तर मान्छेलाई मात्र ‘जना’ ले जनाइन्छ, कम्पनीलाई होइन। कम्पनीलाई त वटा भन्नु पर्‍यो।
अब मिडियाले मान्छे गन्न नजानेको हो कि विशेष अदालतका कर्मचारीले त्यो चाहिँ थाहा भएन। विशेष अदालतका कर्मचारीले गल्ती नै गरेको भए पनि भेरिफाइ गर्नुपर्ने त मिडियाले नै हो। यसमा मिडियाको ज्यादा गल्ती देखिन्छ है।
ए साथी हो, हतार नगरौँ न। केको हतार हो ! कहाँ जान हतार हो? ढिलै भए पनि सही कुरा लेखौँ, विश्वास जितौँ।
1 thought on “१० हो कि १२ : मान्छे गन्न नजान्ने पत्रकार कि अदालतका कर्मचारी?”
के गर्ने ? नेपालका हस्ती पत्रकार भनेकै ऋषि धमला जस्तै हुन्। लेखाई पढाई नास्ती दिमागलाई सास्ती ! तर मूल प्रवाह भनिने मेडिया हरु कै फाई फुइ र चुरी फुरी ज्यादा छ। जनता भेडा बनेका छन् , बस्।